Madaxweynaha Soomaaliya oo tacsi ka diray geerida hooyada dhashay Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Soomaaliya oo tacsi ka diray geerida hooyada dhashay Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid
Muqdisho, 12 Febraayo 2015: Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi direy Raiisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo hooyadii Allah u naxariistee marxuumad Ruqiyo Macallin Daahir ay ku geeriyootay dalka Canada.
“Waxaan aad uga tiiraanyeysanahay geerida marxuumadda.. Allah u naxariisto, jannadii fardowsana Allah ka waraabiyo, waxaanna qoyskii iyo eheldadii ay ka tagteyna oo uu Raiisul Wasaare Cumar ka mid yahayna Ilaah uga baryayaasamir iyo iimaan inuu ka siiyo”.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa marxuumadda ku tilmaamey inay ahayd astaan qaran oo Soomaaliya ay weysey.
“Marxuumadda ma ahan oo keliya inay hooyo u ahayd Raiisul Wasaare Cumar Cabdirashiid, balse waxay ahayd oo kale Marwadii 1aad ee uu ka dhintey madaxweyneheenii hore marxuum Cabdirashiid Cali Sharmaarke, sidaa darteed geerideeda, waa mid Soomaali oo dhan taabaneysa”.
Marxuumad Ruqiyo Macallin Daahir ayaa la filayaa in lagu aaso isla dalka Canada oo ay ku geeriyootay.
“Sawirro” muuqaal-Wasiirka cusub ee haweenka oo xilka la wareegtay
"Sawirro" muuqaal-Wasiirka cusub ee haweenka oo xilka la wareegtay